USB na microSD ebe nchekwa niile Kioxia na-eji [Nyocha »| Akụkọ akụrụngwa
USB na microSD na-echeta ihe niile Kioxia na-eji [Nyocha]
Miguel Hernandez | 12/02/2021 22:00 | General, Nyocha
Ihe nchekwa nchekwa abawanyeala n'ụzọ pụtara oke, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche mkpa ndị ọrụ yana ike nke faịlụ ọhụụ ọhụrụ ahụ nwere mkpebi 4K na-ewu ewu. Ọ bụ ya mere akara a ma ama Kioxia ekpebiela imeghachite kaadi microSD ya na eriri USB.
Taa, anyị nwere tebụl ule U365 USB na ebe nchekwa na kaadi microcer Exceria 128 GB site na Kioxia. Chọpụta arụmọrụ ya na ihe ezigbo ike ya bụ ịme ndekọ, nchekwa na ọrụ ọkpụkpọ, yabụ meziwanye ụzọ ị mepụtara ma rie ọdịnaya.
2 Exceria microSDXC UHS-M 128GB
N'okwu a anyị na-amalite site na ebe nchekwa USB Kioxia 128GB. Ọhụrụ igba egbe nke ika na-awa ikike nke 32/64/128 na 256 GB. Ezigbo ojiji ya bụ nke nnyefe data ma nwee teknụzụ USB. 3.2 Jen 1.
Size: X x 55,0 21,4 8,5 mm
Ibu ibu: 9 grams
Nwere eji mmịfe taabụ nke ahụ ga - enyere anyị aka ịchekwa USB ma si otú a chebe njedebe iji melite njigide nke ngwaahịa a. Dika aturu anya, anyi na Windows 8 gaa n'ihu ma macOS X 10.11.
Zụta Kioxia U365 site na € 13,30 na Amazon
Dịka uru, ngwaahịa Kioxia niile nwere akwụkwọ ikike afọ ise. Ọ bụ nke nwa plastic doro anya lekwasịrị anya anwụ ngwa ngwa. N'ime ule anyị, anyị enwetala arụmọrụ nke ihe dịka 30 MB / s ederede na ihe gbasara 180 MB / s ịgụ, ihe dị n'elu ọbụna data nke akara ahụ na-enye, nke na-eme ka ọ dịkarịa ala 150 MB / s.
N'ụzọ dị otú a, ọ na-aghọ ezigbo ngwaahịa iji nyefee akwụkwọ ndabere anyị ma ọ bụ nwee nchekwa nke abụọ na PC ma ọ bụ Mac anyị. Anyị onwe anyị nyochara ojiji na-ebufe ihe nkiri 4K HDR, na-enye anyị ohere ịfe vidiyo na àgwà ndị a ruo na 30 Fps kachasị elu, ya mere ọ na-egosi dị ka nhọrọ dịgasị iche ma na-atọ ụtọ. Ọnụahịa ya ga-adị n'etiti € 20 na € 30 dabere na isi ire ere ruo 256 GB.
Exceria microSDXC UHS-M 128GB
Ugbu a, anyị na-atụgharị na kaadị microSD, ọkachasị na ụdị 128GB nke ama ama Exceria nke egosiri na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Dị ka anyị kwuru na mbụ, anyị nwere microSDXC m ngwaahịa nke Klas 10 U3 (V30) karịsịa lekwasịrị anya na ndekọ na video playback na 4K mkpebi dika aturu anya. Ya mere, egosiri ya dị ka ngwaahịa akwadoro maka ekwentị mkpanaaka dị elu ma ọ bụ ndekọ na ese foto.
N'okwu a, nyocha ndị emere emeela ka nsonaazụ ndị ahụ mara ọkwa ahụ, iru 85 MB / s ederede na 100 MB / s nke ọgụgụ. Nke a bara uru nke ọma ma a bịa n'ịgbughachi data anyị na-ejide n'oge, ma ịdekọ ma nhapụta abụrụwo ihe dị mma. N'ime ule anyị, anyị ejirila Dashcam na-edekọ na 1080p na 60FPS ma anyị ahụbeghị nsogbu ọ bụla. Anyị ejirila Xiaomi Mi Action Camera 4K wee mee ihe n'ụzọ gara nke ọma na data Kioxia na-enye na ntanetị weebụ ya maka ịgụ na ide.
Zụrụ kaadị Kioxia microSD
Na mkpokọta anyị ga-enwe ike ịchekwa ihe dịka foto 38500, banyere 1490 nkeji nke ndekọ na mkpebi Full HD ma ọ bụ 314 nkeji nke 4K ndekọ. Dịka nkọwa zuru oke, kaadị a dakọtara na ngwaahịa gam akporo niile, nwere nsogbu ESD, bụ ihe na-enweghị mmiri na X-ray (ọ gaghị agbaji mgbe ejiri teknụzụ a nyocha). N'otu ụzọ ahụ, ọ nwere mgbochi oke ọkụ iji zere ịlafu data gị n'ihi njehie okpomọkụ ma na-eguzogide oke egwu.
Aka na BiCS Flash nke na-ekwe nkwa ogologo oge ya na igwe onyunyo onyunyo na dashcams ndị na-edekọ ma na-ehichapụ ọdịnaya nke nchekwa ahụ, ezigbo nhọrọ iji mepụta nchekwa nchekwa kwụ ọtọ.
Dị ka n'oge ndị gara aga, Kioxia awade a microSD na nchekwa nke 32/64/125 na 256 GB na mkpokọta, dakọtara na ngwaọrụ FAT32 ndị ka okenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » USB na microSD na-echeta ihe niile Kioxia na-eji [Nyocha]
Anyị nwalere Aukey si USB-C Hub, 8-port niile na-na-otu zuru okè maka ọhụrụ MacBook M1 [Nyocha]
Etu ibudata Photomath maka PC Free (Kacha ọhụrụ na nsụgharị)